Traamp Abbaa Alangaa Addaa Dhimma Qorannaa Raashiyaaf Ramadame Hin Simadhu Jedhan
Yaada Falmlisiisaa Traamp Kennan Sababaa Gad Cabuu Gabaa Addunyaa Ta’e
Prezidaant Doonaald Traamp qorataaan addaa dhima duula filannoo isaanii fi Raashiyaa gidduu jiruuf moggaafame mormanii jiran.
Har’a ganama barii ergaa twiterii irratti maxxansaniin, hojii seeraan alaa raawwatame qorachuuf takkaa abbaan alangaa addaa kan mormituu isaanii turan Hillarys ta’e kan prezidaant duraanii Baraak Obaamaaf ramadamee hin beeku jechuun komee dhiyeessan.
Traamp kaleessa direcktorri FBI duraanii Robert Mueller hidhata gargaartota isaanii fi angawoota Raashiyaa gidduu ture ilaalchisee qorannaa geggeessamu akka hoogganan moggaafamuu isaanii mormiin deebii kennan.
Tiki nageenya US duruu Moscown Taamp akka njifatan gochuuf galmee duula filannoo Clinton komupteraan miliqsanii saaxiluu dhaan gidduu seeneera jechuun amanee jira.
Traamp kan injifannoo isaanii prezidaantummaa isaanii fudhatama kan dhabsiisu dhimma kamiinuu hin fudhatan, kanaaf qorannaa Raashiyaa ilaalchisee geggeessamu fudhatama dhabsiisaa turan. Waa’een jiddu seeninsa Raashiyaa sababaa dimokraatonni Clinton injifachuu dhabuu isaaniitti aaraniif ka’e jedhan.
Gama biraatiin, Prezidaantiin US donaald Tramp gochi isaanii fi haasaa isaan dhageessisan wal falmisiisisaa ta’uu isaan wal qabatee investeroota waan yaaddesseef gatiin doolaara aksiyoonii fi boondii Ameerikaa gad bu’uu isaatti aansuu dhaan gabaan aksiyoonii Asia fi awrppaa gad bu’ee jira.
Galmeen aksiyoonii US kaleessa 1.8gn kan gad bu’e yoo ta’u dow Jones Industiral ka jedhamu immoo qabxii 372n gad bu’e.
Hawaasi Somaaliyaa kanneen Minnesota keessaa Dhibee Gifiraatu Isaan Mudate